Olee Otú Ihe Ga-adịrị Ụmụ Mmadụ n’Ọdịnihu? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Otú Ndịàmà Jehova na Ndị Mmadụ Si Amụ Baịbụl
Ajụjụ Atọ Gbanwere Ndụ M
Ihe Dị Oké Ọnụ Ahịa A Chọtara n’Ebe A Na-ekpofu Ihe
Olee Ihe Mere Anyị Kwesịrị Iji Na-echeta Ọnwụ Jizọs?
Baịbụl Ọ̀ Bụ Okwu Chineke?
ỤLỌ NCHE EPREL 2015
Olee otú ihe ga-adịrị ụmụ mmadụ n’ọdịnihu?
Olee otú ọnwụ Jizọs ga-esi eme ka mmadụ niile hụ ibe ha n’anya?
O doro anya na ndị sayensị ga na-emepụtakwu ọtụtụ ihe ndị e ji enyere ndụ aka. Ma, hà ga-emeli ka mmadụ niile hụ ibe ha n’anya? Mba. Ọtụtụ ndị nọ n’ụwa taa na-achọ naanị ọdịmma onwe ha, bụrụkwa ndị anyaukwu. Ma, ihe ọma Chineke bu n’obi imere anyị n’ọdịnihu enweghị atụ.—Gụọ 2 Pita 3:13.
Baịbụl kwuru na oge na-abịa mgbe mmadụ niile nọ n’ụwa a ga-ahụ ibe ha n’anya. Obi ga-eru onye ọ bụla ala, o nweghịkwa onye ga-akpatara ha nsogbu.—Gụọ Maịka 4:3, 4.
Olee otú ụmụ mmadụ ga-esi kwụsị ịchọ naanị ọdịmma onwe ha?
Chineke ekeghị mmadụ ka ọ na-achọ naanị ọdịmma onwe ya. Ma, mgbe nwoke mbụ Chineke kere nupụụrụ ya isi, ọ ghọziri onye na-ezughị okè. Ọ bụ ya bufeere anyị ịchọ ọdịmma onwe anyị naanị. Ma, Chineke ga-esi n’aka Jizọs mee ka ụmụ mmadụ zuokwa okè ọzọ.—Gụọ Ndị Rom 7:21, 24, 25.
Iji mezuo ihe a Chineke chọrọ, Jizọs ji ndụ ya chụọ àjà ka o nwee ike mezie ihe nnupụisi nwoke mbụ ahụ kpataara anyị. (Ndị Rom 5:19) Jizọs si otú ahụ mee ka ụmụ mmadụ nwee olileanya na o nweghịzi ndị ga na-achọ naanị ọdịmma onwe ha n’ọdịnihu, ọ gaghịkwa na-agụ ndị mmadụ agụụ ime ihe ọjọọ.—Gụọ Abụ Ọma 37:9-11.
Gịnị Ka Chineke Bu n’Obi Kee Ụwa Anyị A?
Baịbụl kwuru ihe mere Chineke ji kee ụwa, mgbe nsogbu ga-akwụsị, otú ụwa ga-esi ghọọ paradaịs na ndị ga-ebi na ya.
Ihe Mgbapụta Ahụ—Onyinye Kasịnụ Chineke Nyere
mailto:?body=Olee Otú Ihe Ga-adịrị Ụmụ Mmadụ n’Ọdịnihu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015248%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Ihe Ga-adịrị Ụmụ Mmadụ n’Ọdịnihu?
EPREL 2015 Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?
mailto:?body=EPREL 2015 Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw15%26issue%3D20150401%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=EPREL 2015 Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?
Ọ̀ Bụ Chineke Na-akpata Ahụhụ Anyị Na-ata?
Chineke Ọ̀ Na-aza Ekpere Niile? Ò Nwere Otú Pụrụ Iche Anyị Kwesịrị Ịnọ Mgbe Anyị Na-ekpe Ekpere?
Ọ̀ Bụ Mmadụ Malitere Okpukpe?